Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Costa Rica » Maxay tahay sababta dhammaan dadka reer Costa Rica ay u doorteen Muwaadiniin?
Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • Wararka Costa Rica • El Salvador Breaking News • Wararka Dowladda • Wararka Guatemala • Wararka Honduras • News • Wararka Nicaragua • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Nicaragua, Costa Rica dhammaantood waxay wadaagaan taariikhda Maalinta Guanacaste ee maanta, oo ay jecel yihiin dadka soo booqda iyo dadka ku nool Costa Rica
Jamhuuriyadda Bartamaha Ameerika waxay u dabaaldegtaa Maalinta Guanacaste
Xukunkii Isbaanishka ee bartamaha Ameerika wuxuu dhammaaday 1812 kadib Dagaalkii Xorriyadda ee Mexico. Sannadkii 1824 -kii, Costa Rica waxay ka mid ahayd waddammada Jamhuuriyadda Federaalka ee Bartamaha Ameerika, oo ay weheliyaan dawlado kale sida El Salvador, Guatemala, Honduras, iyo Nicaragua.
Maalinta Guanacaste waa fasax dadweyne ee Costa Rica, oo la xuso 25 -ka July. Tallaabo loogu talagalay in lagu soo nooleeyo waaxda dalxiiska ka dib masiibada COVID-19, fasaxan waxaa loo wareejin doonaa Isniinta soo socota laga bilaabo 2022 iyo wixii ka dambeeya
Sidoo kale loo yaqaan 'Annexation of Nicoya Day' (La Anexión del Partido de Nicoya), maalintani waxay calaamad u tahay ku -biirinta Guanacaste 1824 -kii markii gobolku ka mid noqday Costa Rica.
Gobolka Guanacaste wuxuu ka mid ahaa Nicaragua wuxuuna xuduud la lahaa waqooyiga Costa Rica. Saddexda magaalo ee waaweyn ee Guanacaste, waxaa ka dhacay shirar furan oo looga arrinsanayo ka -wareegidda Nicaragua oo loo wareejiyo Costa Rica. Afti ayaa loo yeedhay si loo go'aamiyo waxa la samaynayo. Aftida, Nicoya iyo Santa Cruz ayaa haa ugu codeeyay inay ku biiraan Costa Rica, halka Liberia ay u codaysay inay la joogto Nicaragua. Natiijada guud waxay ahayd mid ku habboon in Costa Rica lagu daro.
Jamhuuriyadda Federaalka ee Bartamaha Ameerika ayaa si sax ah u meelmarisay sharciga oo saxiixday 25 -kii Luulyo 1824, taasoo u oggolaanaysa Gobolka Guanacaste inuu ka mid noqdo dhulka Costa Rican.
Sannad kasta, Luulyo 25, booqde ayaa wax yar ogaan doona kala duwan dhacaya. Caruurta iskuulku iskuul kuma jiraan. Bangiyada, xafiisyada dowladda, iyo goobaha kale ee ganacsiga ayaa xiran. Dadka - iyo gaar ahaan carruurta yaryar - ayaa labbisan dharka caadiga ah (labiska caadiga ah, sida caadiga ah kala duwan cas, caddaan, iyo buluug).
Qarsoodi, la xaliyay: Maanta waa “Guanacaste Day” ama si rasmi ah, dabbaaldegga “la Anexión del Partido de Nicoya” (the “Lifaaqa Guanacaste").
Fasaxa ayaa si gaar ah ugu weyn halkan Tamarindo, maadaama aan joogno gobolka Guanacaste - xuddunta u ah dabbaaldegga maalinta. Taasi waxay tidhi, Maalinta Guanacaste waa fasax weyn oo ku baahsan Costa Rica, oo kaliya maahan Guanacaste: Maanta waa fasax rasmi ah dhammaan toddobada gobol. Maanta waxay maamuustaa maalintii jasiiradeenna - oo hadda ah gobol - ay ka mid noqotay Costa Rica. Maanta waa maalin loo dabbaaldego.
Dhammaantood Waxay Bilowdeen Qarniyado Kahor…
Maanta ma bilaaban maanta mana aha sannado badan ka hor - qarniyo ka hor, dhab ahaantii, markii Isbaanishku markii ugu horreysay gumeystay gobolka aan hadda u naqaanno Bartamaha Ameerika. Intii u dhaxeysay 1500s (gumeysi) iyo horaantii 1800 (xornimada), Bartamaha Ameerika wuxuu ka koobnaa dhowr gobol oo Isbaanish ah. Laba gobol oo noocaas ah: Gobolka Costa Rica iyo Gobolka Nicaragua.
Inta lagu guda jiro muddadan, the Partido de Nicoya - aag maanta, ka kooban ku dhawaad ​​dhammaan gobolka Guanacaste ee Costa Rica daacad u ahaanshaha labada gobol ee Costa Rica iyo Nicaragua. The xaflad sidoo kale wuxuu ku dhex milmay madaxbannaanida siyaasadeed - dabcan, had iyo jeer daacad u ahaanshaha caasimadda Bartamaha Ameerika ee Guatemala.
Muddadii saddexda qarni ahayd, ayaa Partido de Nicoya waxay la yeelatay xiriir dhaqaale iyo ganacsi Gobolka Costa Rica. Marka, 1812, markii Isbaanishku ugu yeeray wakiillada gobollada inay kaqeyb galaan Cortes de Cádiz (Cadiz Courts), Nicoya wuxuu doortay inuu u diro wakiilkooda xiriirka Costa Rican. Isbahaysi rasmi ah ayaa dhashay.
Wax ka yar toban sano kadib, 1821, Bartamaha Ameerika ayaa noqday ka madaxbanaan Spain. Sannadkii 1824, Bartamaha Ameerika waxay samaysatay qaran madaxbannaan, the República Federal de Centroamérica, haddii kale loo yaqaan Jamhuuriyadda Federaalka ee Bartamaha Ameerika.
Guanacaste: Ikhtiyaar Madaxbanaan
The Partido de Nicoya wuxuu ku sugnaa meel isbedel: Ma waxay ku biirayaan Jamhuuriyadda Federaalka ee Bartamaha Ameerika iyagoo qayb ka ah gobolka madaxbannaan ee Nicaragua, ama qayb ka ah gobolka madaxbannaan ee Costa Rica?
Waqtigaas, Nicaragua waxaa la kulmay rabshado iyo khilaaf siyaasadeed. Costa Rica, dhanka kale, waxay ahayd mid nabdoon. Intaa waxaa sii dheer, xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Costa Rica iyo kan xaflad wali way xoog badnaayeen (wayna sii xoogaysanayeen).
Laakiin dabcan, arrimuhu sidaas uma kala cadayn: Waxaa jiray xiriir siyaasadeed iyo mid bulsho oo labada gobol ee madaxa bannaan. Marka, markii Costa Rica ay fidisay casuumaad juquraafiyadeed Partido de Nicoya, Nicoya ayaa ku baaqday in cod loo qaado.
Saddexda magaalo ee waaweyn ee Nicoya - Villa de Guanacaste (oo hadda ah Liberia), Nicoya, iyo Santa Cruz - ayaa dhowr bilood ku qaatay 1824kii, iyagoo ka wada hadlay suurtagalnimada. Gabagabadii, Nicoya iyo Santa Cruz waxay ku codeeyeen haa: The Partido de Nicoya ayaa ku biiri doona Costa Rica.
Taariikhdu waxay ahayd July 25, 1824.
Maanta, Costa Rica waxay u taagan tahay nabad iyo dimuqraadiyad
Markaa maanta iyo 25 -ka Luulyo oo dhan, Costa Rica oo dhan, waxaan u dabbaaldegnaa gobol go'aan nabadeed (oo dimuqraadi ah) inay ku soo biiraan qarankeenna nabdoon (iyo dimuqraadiyadda).
Waa dareen aad meel walba ka maqli doonto iyo inta badan: “de la patria por nuestra voluntead ” - "Costa Rican doorasho." Waxaan nahay Costa Rican sababtoo ah waxaan dooranay inaan sidaas ahaano, waana ku faraxsanahay doorashada. Oo sidaas daraaddeed, maanta, waxaad u badan tahay inaad maqasho wax badan music, dhowr arag rashka, oo cagahaaga qaar taabo qoob ka ciyaarka dhaqanka. Haddii aad nasiib leedahay, waxaa laga yaabaa inaad qabato a parade.
Oo intaad ku jirto, ha ilaawin inaad gacanta ku qabato tortilla iyo koob ah casiir tamarind. Waxay yihiin dhaqan Guanacaste lagu faano!